IQela leMveliso yeBracalente-IQela leMveliso yeBracalente
ICORONAVIRUS (COVID-19) UKUHLAZIYA (Cofa apha)
2: Ukwenziwa kwesivumelwano
3: Unikezelo lweeKhonkco
4: Uqinisekiso lomgangatho
5: Ulawulo lomngcipheko
6: Ukuphuculwa okuqhubekayo
Ubuchule | Ukhuselo
Amandla, izixhobo kunye noQinisekiso
Inkcubeko kunye neMisebenzi
IQela leMveliso yeBracalente
Izisombululo zeMveliso yoLungiso kwiNtengiso yeHlabathi
Bukela iBali lethu leBrasalente
Kwizizukulwana ezingaphezu kwesithathu, besibonelela ngezisombululo zokuvelisa kubathengi bethu.
Amalungu ethu ngamacandelo aphambili anceda ukuqhubela phambili amashishini ukusuka kwiAerospace, kwiZithuthi, kwezoLimo kunye nezoMbane ukuya kwiMizi-mveliso, kwezonyango, kwioyile nakwirhasi, kwezokuzonwabisa nakwicebo. Umahluko wethu ukwindlela yethu kwishishini lakho. Abantu bethu lulwandiso lweqela lakho. Siyayazi imveliso kuba singabavelisi abakha izisombululo ezijikeleze ishishini lakho.
Sikubiza ngokuba yi-Bracalente Edge.™
Funda ukuba siwenza njani
Ibali lethu leBrasalente
Izisombululo zethu ezichanekileyo zokuvelisa ziqhuba abaphazamisi beemarike kunye neenkokheli ezintsha emoyeni, emhlabeni nakuyo yonke indawo ephakathi.
I-Aerospace ulimo Automotive Electronics amashishini Medical Ioli neGesi Lonwabo Ubuchule | Ukhuselo
Ukusuka kwimbono ukuya kwindalo, izixhobo zakho ezichanekileyo zokuhambisa izinto zihanjiswa ngexesha kunye nenqanaba eliphezulu lomgangatho kunye nokuthembeka.
Precision CNC Ivula
Ukuphawula / ukumakisha
Izikhulisi zoMoya zoMoya
Ukutshintshwa kwe Rotary yeCCC
CNC nkqo Machining Centre
Ukubhola, Milling kunye Tapping
Ukufumana / Ukugqiba
Izixhobo ezikhethekileyo zokuCoca izixhobo
I-Spectrometer Metal Analyzer
Intsimbi kunye nokuphosa
Ukukhanya kweAlloys zensimbi
Iiplastiki / zokwenziwa
Izinto ezingaphili ngentsimbi
Ukuveliswa kwemvumelwano ekhethekileyo, ukucwangciswa kwemisebenzi kunye neqela elizinikele kuwe
Jonga indlela esenza ngayo
Ngo-1950, uSilvene Bracalente wavula ivenkile yomatshini ngaphandle kwePhiladelphia, ePennsylvania. Kwizizukulwana ezithathu kamva, i-Bracalente iseyeyosapho kwaye iyasebenza kwaye yenza izisombululo zokuvelisa ezinokuthenjwa kwiinkampani kwihlabathi liphela.
Iqela lethu libonakalisa amaxabiso ethu asisiseko. Jonga ukuba kutheni abantu bethu beyona nto yethu ixabisekileyo.
Bhalisela iincwadana yethu
Kwizizukulwana ezingaphezu kwesithathu, iQela leMveliso yeBracalente ibisinika izisombululo ezichanekileyo zokuvelisa kwintengiso yehlabathi. Ukusuka prototype ukuya kwimveliso, kunye neendawo e-US, China, Vietnam nase-India, i-BMG ihambisa umgangatho, izinto zexesha le-aerospace, ezolimo, ezemoto, i-elektroniki, ezemizi-mveliso, ezonyango, ioyile kunye negesi, ezolonwabo kunye neqhinga.
© 2022 IQela lokuThengisa iBrazil
Sisebenzisa ii-cookies kwiwebhusayithi yethu ukukunika amava afanelekileyo ngokukhumbula izinto ozikhethayo kunye nokuphinda utyelelo. Ngokucofa "Ndiyavuma", uyavuma ukusetyenziswa kwazo ZONKE iicookies.
Ukhetho loKhetho loBucala
Ngezizathu zokusebenza nezokhuseleko, sisebenzisa i-Cloudflare njengenethiwekhi ye-CDN.
Xa ugcwalisa ifom kule ndawo, uyavuma ukuvumela i-Bracalente ukuba igcine kwaye isebenzise idatha yobuqu ngeMailchimp kunye neHubspot. Sizimisele ukukhusela nokuhlonipha imfihlo yakho, kwaye siza kusebenzisa kuphela iinkcukacha zakho ukulawula iakhawunti yakho kunye nokubonelela ngemveliso kunye neenkonzo ozicelileyo kuthi. Amaxesha ngamaxesha, singathanda ukunxibelelana nawe malunga neemveliso kunye neenkonzo zethu, kunye nomnye umxholo onokuba nomdla kuwo. Ungarhoxa kunxibelelwano ngalo naliphi na ixesha.
IGTranslate yiplagi esiyisebenzisayo ukuguqulela umxholo wewebhusayithi kwiilwimi ezahlukeneyo. Isekwe kwiToliki kaGoogle, enokuthi isete i "googtrans" ikuki ukukhumbula ulwimi olukhethiweyo.
Imigca ye Google
Le ndawo isebenzisa iifonti zikaGoogle ngeGoogle API. Ukuba ifonti iceliwe ngumkhangeli wakho, idilesi ye-IP irekhodwa nguGoogle kwaye isetyenziselwa uhlalutyo.
Sisebenzisa inkonzo yeYouTube ukwenza ividiyo ukuba isasaze kule ndawo.
Sisebenzisa uhlalutyo lukaGoogle kunye neWebtrax ukubeka esweni ukugcwala kwewebhusayithi yethu kunye nokwenza iintengiso ezijolise kuzo.